.:: Life is Light ::.
1 comments Posted by ShweMyat at 2:01 AM
" Death - Life - Birth "
" Love - Hope - Courgae "
From the quote of "Cloud Atlas" Film.
1 comments Posted by ShweMyat at 9:10 PM
ငါတို့နှစ်ယောက် အိပ်မက်တွေက ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတယ် ....
3 comments Posted by ShweMyat at 9:10 PM
My New Board Design
3 comments Posted by ShweMyat at 9:33 AM
ဒီရက်ပိုင်းတွေအင်တာနက်ကလဲ မကောင်းဆိုတော့ ကျနော့ခင်ဗျာ .. အချိန်ပိုလေးတွေထွက်လာတယ် .. ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ ကျနော့စကိတ်ဘုတ်လေးကို ဒီဇိုင်းအသစ်ဆွဲလိုက်တယ် ... ကျနော့ Favourite Band ဖြစ်တဲ့ Linkin Park ရဲ့ စာလုံးနဲ့ လိုဂိုကိုပဲ ရှင်းရှင်းလေးပဲထားလိုက်တော့တယ် .. ဒဂယ်တော့ ဆွဲချင်တာပဲရှိတာ spary နဲ့ဆွဲရတာ မကျွမ်းကျင်တော့(ကျန်တာတွေလဲ မကျွမ်းကျင်ပါဘူး... ဒီဇိုင်းနဲ့ပါတ်သက်လာရင် ပိန်းကိုပိန်းတာ) သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထွက်မလာပဲ .. ပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့တာပဲ ....
Labels: Design, Skateboard, Spray Paint
Why Why ? ? ?
3 comments Posted by ShweMyat at 6:31 AM
ဘာဖြစ်လို့များ ... ဒီလောက်ရက်စက်ရတာလဲ ... လူသားချင်း စာနာစိတ်တွေ မရှိရတာလဲ . . .
4 comments Posted by ShweMyat at 6:44 PM
Yoo~ That my minicity =P .. i got Rank 14 in Myanmar Country .... ~~~~ =] kwi kwi ^_^
Kaspersky Antivirus Keys
2 comments Posted by ShweMyat at 6:01 PM
ကျနော်သုံးနေတဲ့ Kaspersky Antivirus မှာ သုံးနေတဲ့ Activate Key Blacklisted ဖြစ်သွားလို့ ဟိုရှာဒီရှာရင်းနဲ့ ဒီဆိုဒ်လေးကို တွေ့လို့ သူငယ်ချင်းတို့ကိုပြန်ပြီး share လိုက်တာပါ... Kaspersky Antivirus အတွက် Activation Keys တွေကို Free ပေးထားတဲ့ဆိုဒ်လေးပါ ... အခုနောက်ဆုံး April 25 ရက်နေ့အထိတော့ Update လုပ်ထားပေးပါတယ်... လိပ်စာကတော့ [ www.kavkiskey.com ] ပါ ...
အရင်ဆုံး Key ၁ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင် အဲဒီ key ကို download ချဖို့ page တစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်... အဲဒီ page ရဲ့ logo အောက်မှာ Click to download this file ဆိုတဲ့ လင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် သင့်အတွက် ၁နှစ်စာအသုံးပြုလို့ရမဲ့ key တစ်ခုကိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Labels: Download, Kaspersky
:: Ko Kyaw Min Tun
:: Poung Poung
:: Hack For All Group
:: Lin Lin
:: သူငယ်ချင်း ကင်းမြီးကောက်(သို့)နီ
Drop MSG For Me !
Hlaing Oo Maw (1)
mircrosoft exam (2)
my myanmar (2)
my one (1)
Thingyan Moe (1)
My Web Stat
Copyright © 2007 - .:: Life is Light ::. - is proudly powered by Blogger